Benin | Wararka Safarka
In kasta oo dhibaato hore soo martay, maanta Benin waxay tusaale u tahay xasilloonida qaaradda waxayna u taagan tahay sheekada dal Afrikaan ah oo iskiis u sameystay oo dhammaad wanaagsan leh. Haddii Benin wax la yaab ku tahay, waa dabeecaddeeda xiisaha leh ee lagu metelo Beerta Qaranka ee Pendejari iyo xeeb ay ka buuxaan geedo timireed taasoo ka dhigaysa kuwa jecel badda iyo xeebta jacayl.
Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale ku qanacsan tahay guryaheeda dhaadheer, hidaha Afro-Brazil ee Ouidah iyo Porto Novo iyo sidoo kale dhaqankeeda xiisaha leh ee Somba. Benin waa dalxiis lagu noolaado. Kani ma noqon doonaa meeshaad u socoto ee soo socota?
1 Goormaad aadaysaa Benin?
2 Sidee loo tagaa Benin?
3 Ma u baahanahay fiiso si aan u galo Benin?
4 Ma jiraan talaallo khasab ah oo lagu galayo Benin?
5 Maxaa lagu arkaa Benin?
5.1 Beerta Qaranka Pendjari
5.3 Harada Ahémé
5.4 Raadinta Addoonta Ouidah
5.5 Qasriga Abomey
Goormaad aadaysaa Benin?
Waqtiga ugu wanaagsan ee la booqdo Benin waa laga bilaabo Nofeembar ilaa Febraayo oo cimiladu qallalan tahay oo diirran tahay, oo ku habboon aragtida xayawaanka waddanka. Waqtiga ugu kulul ee sanadka waa bisha Maarso ilaa Maajo, kadib markii dabeylaha waxyeelada leh ay dib uraacaan marka cirku cows yahay oo ay jiraan roobab go'doonsan koonfurta. Bilaha Juun ilaa Oktoobar badanaa waxay la mid yihiin roobabka da'a, kuwaasoo hoos u dhaca bartamaha bisha Luulyo ilaa Sebtember koonfurta.
Sidee loo tagaa Benin?
Ma jiraan duullimaadyo toos ah oo u dhexeeya caasimadda Benin (Cotonou) iyo Isbaanish, sidaa darteed si aad u timaaddo waddankan waxaad u baahan tahay ugu yaraan hal joogsi. Duulimaadyada aada Benin waxay ka amba baxaan Paris, Brussels, Istanbul ama Casablanca.
Ma u baahanahay fiiso si aan u galo Benin?
Saamayn ahaan, laakiin helitaankeedu waa mid aad u fudud oo dhakhso badan, maaddaama ay leedahay nidaam deg deg ah oo codsiyada khadka tooska ah laga helo websaydhkeeda rasmiga ah. Marka dukumiintiga la buuxiyo oo la bixiyo, waxaa la soo saaraa muddo ku dhow 48 saacadood gudahood iyadoo leh ansax ahaan ka bilaabmaysa marka fiisada la bixiyo.
Waxa kaliya ee lagama maarmaanka ah ayaa ah in la helo baasaboor shaqeynaya in ka badan 6 bilood laga bilaabo soo gelitaanka la qorsheeyay ee Benin lana doorto inuu yahay 30 ama 90 maalmood.
Ma jiraan talaallo khasab ah oo lagu galayo Benin?
Si aad ugu safartid Benin, tallaalka cudurka qandhada huruuda waa qasab. Waxa kale oo muhiim ah inaad sidato shahaadada tallaalka caalamiga ah halka tallaalkani kaaga muuqanayo shandaddaada. Ku saabsan talaalada lagu taliyey, daaweynta qandhada tiifowga iyo duumada, teetanada, qoorgooyaha iyo cagaarshowga A iyo B.
Maxaa lagu arkaa Benin?
Beerta Qaranka Pendjari
Isaga oo ku dhex jira muuqaalka quruxda badan ee buuraha Atakora iyo savannah, Beerta Qaranka ee Pendjari waa mid ka mid ah keydka dabiiciga ugu wanaagsan Galbeedka Afrika., oo leh xayawaanno duurjoog ah sida libaaxyo, haramcad, daanyeer, hippos, shabeello iyo maroodiyaal, iyo noocyo kale. Waqtiga ugufiican ee la arko baarkigan 2750 km2 waa dhamaadka xilliga qalalan, markay isugu yimaadaan godadka waraabinta.
Waxaa loo yaqaan 'African Venice', 30.000 oo qof oo ka soo jeeda qowmiyada Tofinu ayaa ku nool magaaladan cajiibka ah ee guryaha dhaadheer ee ku yaal buullaha bamboo ee harada Lake Nokoué. Waxay degeen harada dhexdeeda si ay uga baxsadaan boqortooyadii Abomey oo addoommo ahaan uga iibisay reer Yurub. Tofinu wuu ogaa cabsida ay cadawgooda ka qabaan biyaha iyo in aysan waligood gaarin harada si ay u qabtaan. Maanta magaaladan sabaynaysa ee loo yaqaan Ganvié way sii jirtaa waana la sahamin karaa iyada oo la adeegsanayo doon.
Waa meel lama huraan ah in la booqdo inta lagu guda jiro safarka Benin maxaa yeelay Ganvié waa gabal taariikh ah waxayna qayb ka tahay dhaqanka iyo qaab nololeedka Tofinu.
Sawir | Wakaaladda Socdaalka Benin
Waxay ku taal koonfurta-galbeed ee Benin, waa meel u muuqata in wakhtigu istaagayo. Xeebaheeda wax-soo-saarka waa goob qurux badan oo maalmo lagu qaato, gaar ahaan magaalada ugu muhiimsan: Possotomé.
Halkan waxaad ku tagi kartaa safarro kala duwan si aad u barato hareeraha, aad u raacdo doon yar yar harada, ku dabaalan karto ama aad ku baran karto farsamooyinka kalluumeysiga ee dhaqameed. Qaabilaada soo dhaweynta dadka deegaanka waa hadiyad maxaa yeelay waxay u ogolaadaan dadka safarka ah inay indha indheeyaan iyaga oo ka shaqeynaya farshaxanadooda ama ay ku biiraan socod dheer oo ka farxin doona kuwa jecel dabeecada maadaama dhirta caamka ah iyo hantidooda lagu sharaxay.
Raadinta Addoonta Ouidah
Waxaa lagu qiyaasay in ka badan laba milyan oo qof oo ay qabatay boqortooyada Dahomey in loo iibiyay addoomo ahaan ganacsatada si loogu wareejiyo Ameerika. Xeebaha Benin, Ouidah, fagaaraha xaraashka wali wuu jiraa oo waxaad arki kartaa waddo daboolaysa heerarka kala duwan ee kuwa laga qaaday xorriyadooda in la iibiyo oo la raro galleons ku sii jeeda Mareykanka. Xusuus murugo leh wixii ku dhacay dadkaas qarniyo ka hor.
Abomey waxay ahayd caasimad boqortooyadii hore ee Dahomey, oo boqorradeedu ka faa’iideysteen iibinta addoommada ay ka heleen tuulooyinka ku hareeraysan. Qasriyadeeda boqortooyadu waxay soo jireen laga bilaabo qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad waxaana loo tixgeliyaa inay tahay Goob Dhaxal Adduun. Qaar iyaga ka mid ah sida Ghezo ama Glelé waa la booqan karaa oo la tusi karaa awoodda ay boqortooyadan ku lahayd Benin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Afrika » Benin